सन् ५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र खुला सीमा नियमन गर्ने सुझाबसहितको इपिजी प्रतिवेदन अलपत्र « Naya Page
काठमाडौं, १ माघ । विगत अढाई वर्षदेखि नेपालले हरेक औपचारिक राजनीतिक र कूटनीतिक संयन्त्रमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझ्न भारतसँग आग्रह गर्दैै आएको छ । तर, भारतले चासो नै दिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न इपिजीलाई समय नै दिएका छैनन् ।
नेपालमा पछिल्लोपटक केपी ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनीहरूबीच तीनपटक भेट भएको छ । ३ फागुन प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै २४ चैतमा ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यस्तै २८ वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौं आएका थिए । त्यति मात्र होइन, मोदीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा १८ जेठ २०७६ मा ओली भारत गएका थिए । यसरी उनीहरूबीच दुई वर्षमा तीन पटक प्रत्यक्ष भेट भएको छ । तर, एक्ला–एक्लै बुझ्न सक्ने प्रतिवेदन अझै अलपत्र छ ।
नेपालको प्रदेश २ सरकार पनि इपिजीको प्रतिनिधित्व र सिफारिस भएको विषयमा असन्तुष्ट छ । इपिजीमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व नभएको र दुई देशका जनताको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी सीमा नियमनको सिफारिस गरिएकोमा प्रदेश सरकार असन्तुष्टि छ ।
प्रदेश २ को सीमावर्ती बिहार सरकारले पनि जनस्तरको आवतजावतमा असर पर्ने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु नहुने लबिङ दिल्लीमा गरेको थियो । बिहार सरकारको असन्तुष्टिपछि कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षासम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो दिएका छैनन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर ३ देखि ६ कात्तिक ०६८ मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा इपिजी गठन गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति जुटेको थियो । त्यतिखेर १९५० को सन्धिलगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञसम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
इपिजीका सदस्यहरूको मापदण्ड, कार्यविधिलगायत विषय त्यतिवेलै टुंगिएको हो । नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा गर्‍यो । नेपालका तर्फबाट संयोजकमा डा. भेषबहादुर थापा भए भने सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराई रहे । सुरुमा डा. लालबाबु यादवको नाम टुंगो लागेकोमा पछि उनको ठाउँमा राजनलाई राखिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
सन् ५० को सन्धि